Kulula ukwenza futhi okumnandi ikhekhe le-microwave broccoli | Ukupheka Kwekhishi
Ikhekhe le-Microwave broccoli
UCarmen Guillen | | Izitsha, Ungadliwa Kwemifino, Ukupheka Okukhethekile, Ukupheka Okulula
Into enhle ongayithola izindlela ezintsha, ukukhanya esiswini futhi kuyashesha futhi kulula ukwenza ngukuthi ngokushesha sikwenze umkhuba ukuletha lapha. Lezi zinhlobo zokupheka zamukelwa kahle kakhulu nguwe, futhi manje, ehlobo (okungenani lapha eSpain kuyashisa futhi kuyashisa kakhulu), asifuni ukudla izinto ezishisa kakhulu futhi asifuni ukusebenzisa kakhulu isikhathi ekhishini senza isidlo sasemini esiningi noma isidlo sakusihlwa.
Kungakho sikholelwa ku-100% ukuthi uzothanda le recipe ... Kufanele uzame!
Ikhekhe leMicrowave broccoli liyindlela enhle yokudla kwakusihlwa noma yokuhamba nenkambo yokuqala lapho kudliwa. Kuyinto emnandi futhi kulula kakhulu ukuyenza!
Isikhathi Ukupheka: 17 m
Isikhathi esiphelele: 27 m
500 amagremu we-broccoli (ophekwe phambilini)
Amagremu ayi-150 woshizi we-cheddar (oqoshiwe)
Ingcosana kapelepele omnyama womhlabathi
Into yokuqala esizoyenza pheka i-broccolifuthi uma singenakho kuphekiwe. Kuzokwanela ukuyifaka ebhodweni, ngamanzi alimboze ngokuphelele nosawoti. Sibilisa cishe Amaminithi we-5.
Okwamanje, sizosabalalisa uwoyela womnqumo esitsheni esizosisebenzisela ikhekhe lethu le-broccoli. Ngale ndlela, siyaqiniseka ukuthi ayihambisani nezindonga futhi singayisusa ukuze ifulelwe kalula.
Into elandelayo kuzoba ukuthatha i- is y engeza amaqanda ama-3, i-200 ml yobisi (sisebenzise i-semi-skimmed ejwayelekile), a ingcosana kasawoti njengopelepele omnyama womhlabathi. Sishaye kahle size sithole ingxube ehambelana nofana.
Lapho i-broccoli isibilile, sizoyethula ngokulinganayo esitsheni bese sifaka ingxube yangaphambilini esiyishaye esitsheni. Into yokugcina esizoyengeza kuzoba yi- cheddar ushizi taquitos. Sizokusabalalisa kahle kuso sonke isitsha (hhayi kuphela ebusweni kepha nangaphakathi).
Futhi into yokugcina kuzoba ukuyethula kufayela le- microwave, ngamandla aphelele, cishe imizuzu engu-15-17.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ikhekhe le-Microwave broccoli
Inhlanzi ku-sauce ye-microwave